Onyx ကို OS X Yosemite | နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည် ငါက Mac ပါ
Onyx သည် version 2.9 သို့ရောက်ရှိပြီး Yosemite နှင့်လိုက်ဖက်သည်
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | Mac OS X ကို, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ရွေးချယ်စရာများပိုမိုပါသောအခမဲ့အက်ပ်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ပေါ်မှာ system ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ကျိန်းသေ OnyX ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုချက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ cache များကိုရှင်းလင်းရန်နှင့်ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုများကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပြည့်စုံသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကျင့်စာရိတ္တများအပြင်၎င်းကိုအသုံးအပြုဆုံးဖြစ်စေသောတစ်ခုမှာ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီးနောက်အသုံးပြုရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းမလိုအပ်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ယခုသူကနှစ်ပေါင်းများစွာငါတို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည်ကတည်းကအသစ်သောအချည်းနှီးဖြစ်၏ပေမယ့်လည်းအနည်းဆုံးပေမယ့်လည်းမှန်သည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိသေးပေ menu နှင့် interface (အိုင်ကွန်များအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်မှအပ) အနည်းဆုံး၎င်းတွင် Apple ၏ operating system ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အညီအစဉ်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ OS X Yosemite နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုကိုပြသထားတဲ့ version 2.9 ကိုရောက်ရှိနေပြီ စိစစ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဒီအကြောင်းကြောင့်ယေဘူယျပြုပြင်ခြင်းအပြင်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Onyx ဟာအချိန်ကာလတစ်ခုစီအတွက် script တစ်ခုသုံးပြီးနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်အကြားမှာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုရဲ့အချိန်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်လစဉ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် system preferences တွင်ရှာတွေ့နိုင်သောရွေးချယ်စရာအမြောက်အများကိုစုဆောင်းထားသော dock, Finder, Safari, iTunes နှင့်အခြားသူများ၏ parameters များကိုပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိလိမ့်မည်။ အဖြစ် ကွဲပြားခြားနားသော disk ကို image ကို format များထည့်ပါ ဥပမာ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Onyx မှပေးထားသောဤပေါင်းစည်းမှုများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အားဤလျှောက်လွှာကို Mac သုံးစွဲသူမည်သူမဆိုအကြားစျေးနှုန်းမြင့်မားစွာသုံးစွဲသူများအကြားအမြဲတမ်းအကြံပြုစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » Onyx သည် version 2.9 သို့ရောက်ရှိပြီး Yosemite နှင့်လိုက်ဖက်သည်
ဟယ်လို!! ကျွန်ုပ်၏ ONYX ကိုနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံနေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ SMART ကိုစစ်ဆေးရန်ပြောပါသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်“ SMART STATUS သည်ကျွန်ုပ်၏ Hard Disk နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် SMART STATUS ကိုအတည်မပြုရသေးပါ” ငါဘာကြောင့်ဤသတင်းစကားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းနှင့်ငါမက်ဆေ့ခ်ျကိုအရေးမပါသို့မဟုတ်ငါဘာလုပ်ရမှန်းမပါဘဲ update ကိုအတူဆက်လက်လျှင် SMART သဟဇာတဖြစ်ဖို့သိလိုပါတယ်။ ထူးဆန်းတာကကျွန်တော့်ရဲ့ macbook air မှာနောက်ဆုံးပေါ် XOS 10.10 Yosemite update ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mechanical disk ဆိုသည်မှာသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး၏ hard disk များကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏ mac တွင် hard disk မရှိပါ၊ ssd memory ရှိသည်။ SMART သည်စက်မှု discks များ၏သက်တမ်းကိုသာစစ်ဆေးသည်။ ssd ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသေးပါ။ စဉ်းစားပါ၊ လျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းသောအမှားကမရရှိနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုအတည်ပြုရန်ကြိုးစားနေသည်၊
Hard Utility နှင့် Hard Drive ကိုစစ်ဆေးပါ။ (စစ်ဆေးပါသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပါ)
ဟလို Alberto !! မကြာခင်အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သငျသညျ (ငါမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနှင့်ဖျက်ပစ်ပါပြီ) သင်ညွှန်ပြသကဲ့သို့ငါပြုမိပါပြီနှင့်နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စနှင့်အစိမ်းရောင်ပုံနှိပ်ထဲမှာကပြောပါတယ်: ထို disk ကို OK ကိုခံရဖို့ပုံရသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောသတင်းစကားပေါ်လာသည်။
“ SMART STATUS သည်ကျွန်ုပ်၏ Hard Disk နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် SMART STATUS သည်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းမခံရပါ” သင်၏စာသည်စက်တစ်လုံး (သို့) သာမန် discs များအတွက် solid disc တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး
မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့အယ်လ်ဘမ်ဟာအခိုင်အမာရှိတယ်၊ ငါမှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူးဆိုတာမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ အဲဒီသတိပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှုပါ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိုဂရမ်ကိုသုံးတဲ့အခါ disc နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်အဲဒါဟာ disc ကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဖော်ပြတယ်။ Maintenance application ကို Onyx ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီမှလည်းကျွန်ုပ် download လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထပ်တူထပ်မံပြောပါသည်။ ဘယ်လိုအကြပ်အတည်း ... အကူအညီ !!! ဟားဟား
ငါ MakBook Pro မှာ "စက်မှု" disk ရှိတယ်၊ ငါ့ကိုထပ်တူပေးတယ်။
ဟယ်လို!!။ အခြားသူငယ်ချင်းများသည်လည်းအလားတူသတင်းစကားကိုရရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်သည်အမှားပြင်ဆင်ရန်အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးအမှားပြင်ဆင်ရန်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပဲ disk ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်
ငါသည်လည်းအတူတူရနှင့်ငါဒီနှစ် retina နှင့်အတူ macbook လိုလားသူရှိသည် ..
Yosemite ကိုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကသာမာန်အသွင်အပြင်မဟုတ်ဘဲဆဲလ်ဖုန်းပေါ်မှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့တူလာတာပါ။ သူမဒီလိုမျိုးမတွေ့ချင်ဘူး၊ ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းရှိလား။
Claudia Gomez အားပြန်ကြားပါ
X-DORIA၊ သင့် iPhone6အတွက်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အမှု